နေ့များ: May 2011
Posted by KZကေ at 16:55 No comments:
စတီဖင်ဝိန်းဘတ် (Steven Weinberg)က နယူးယော့ စာအုပ်ရီဗျုးမှာ ခန်းနဲ့သူ့ပါရာဒိုင်းအရွေ့အကြောင်းကို ခြေခြေမြစ်မြစ်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နိုဗယ်ဆုရရူပဗေဒပညာရှင်ဟာ ခန်းယူဆထားတဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ သိပ္ပံပညာကြားကကွာခြားချက်ကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ခန်းရဲ့သီအိုရီတွေဟာ သူနားလည်ထားတဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ကိုက် ညီမှုမရှိဘူးလို့လည်းဆိုခဲ့တယ်။ ခန်းရဲ့နောက်ပိုင်းအရေးအသားတွေဟာ သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုရခဲ့တာတွေအပေါ် သံသယပါတဲ့ကောက်ချက်တွေပဲ။ ဒီကောက်ချက်တွေဟာ ခန်းကို သိပ္ပံပညာရဲ့သိမြင်နားလည်မှုကို ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျမှုနဲ့မမြင်ပဲ လူမှုတည်ဆောက်မှုအနေနဲ့မြင်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေကြားမှာ သူရဲကောင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ၀ိန်းဘတ်က ဒါတွေကို ဖတ်ရမြင်ရတာ စိတ်အနှေင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ သိပ္ပံဆိုင်ရာသီအိုရီတွေကို လူမှုတည်ဆောက်မှုနဲ့ရောမြင်တာဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ဘေ့စ်ဘော ဘာမှမကွဲပြားသလိုပဲ လို့လည်းဆိုတယ်။
တိုးတက်မှုနဲ့ပါတ်သက်လို့လည်းသူဟာ ခန်းအယူအဆကိုသဘောမတွေ့ပြန်ဘူး။ ခန်းကပြောတယ်။ သီအိုရီတွေဟာ သိပ္ပံနည်းပညာတော်လှန်ရေးတခုပြီးမှဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုတာကလည်းအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးတဲ့။ ဒါကဘာကိုပြောတာနဲ့တူနေသလဲဆိုတော့ ဒီနည်းပညာတော်လှန်ရေးတခုမဖြစ်ခင်မှာကိုပဲသိရမဲ့ဟာတွေက သိထားပြီးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ ၁၉၉၂ က သူ ဟားဗတ်မှာပေးတဲ့လက်ချာတခုအရဆိုရင် သိပ္ပံသီအိုရီတခုဟာ အမှန်တရားနဲ့နီးကပ်လာတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတယ် လို့ပြောရမှန်းမသိဘူးလို့တောင် သူမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။
ဒါတောင် ၀ိန်းဘတ်မပြောခဲ့တာတခုရှိနေပါသေးတယ်။ တကယ်သာ အထိုင်တွေ (ပါရာဒိုင်းတွေ) ဟာသာ စံတခုထဲကနေယှဉ်ထိုးပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီစံတခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မဖော်ပြနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုဘာလို့ သုံးဖို့လိုဦးမလဲ။ ဟစ်ပါးစုရဲ့သက်သေပြချက်တွေကို ပိုက်သာဂိုရဂိုဏ်းသားတွေကနားမလည်(နိုင်)ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့်သူ့ကိုသတ်ပစ်ဖို့လိုနေသေးလဲ။
၀ိန်းဘတ်ဟာ (ကျနော့်လိုပဲ) ခန်းရဲ့သိပ္ပံပညာတော်လှန်ရေးဆိုတာဘာလဲ (What are scientific revolution?) ထဲကနမူနာတခုကိုပြောတယ် ဒီထဲ အရစ္စတိုတယ်၊ ပုံရိပ်အလှန်တို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ပါလာတယ်။ သူ့သဘောထားက ကျုပ်ပြောတာတွေခင်ဗျားနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ ပြောတာသာလက်ခံထားလိုက်စမ်းပါ ဆိုတာမျိုးပဲ။
“ကျနော် (ခန်း) အရစ္စတိုတယ်ရဲ့အရေးအသားကို၁၉၄၇ နွေမှာဖတ်တယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ရူပဗေဒ တက်နေတဲ့အချိန်၊ စက်မှုပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပါတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတခုကိုသိပ္ပံသမားမဟုတ်သူတွေအတွက် စာတမ်းတခုရေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ ကျနော်စားပွဲမှာထိုင် ရှေ့မှာအရစ္စတိုတယ်ရဲ့ ရူပဗေဒဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖွင့် လက်ထဲမှာလေးရောင်စုံခဲတံနဲ့။ ပြူတင်းပေါက်ကို အကြောင်းမဲ့ မျောပြီး ကျနော်ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက် ဟိုတစဒီတစရှိနေတဲ့စိတ်ကူးတွေဟာသူ့ဘာသာသူစုမိပြီးပုံစံအသစ်တမျိုးထွက်လာတယ်။ အရစ္စတိုတယ်ဟာ ရူပဗေဒကိုသေခြာသိမြင်နားလည်သူလို့ကျနော် လက်ခံလိုက်တယ်။ အိပ်မက် ဆန်ဆန်ပုံစံ မျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ သူပြောခဲ့တာတွေကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲ၊ သူ့သြဇာဘယ်လောက်ရှိခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ပထမဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖော်ပြချက်၊ အယူအဆတွေဟာ အစဉ်အလာခိုင်ခိုင်မာမာလက်ခံနေတဲ့ဘောင်ထဲမှာ အလွန်ဆုံးနဲနဲပါးပါးချွတ်ချော်နိုင်တယ် သတိထားရမယ် ဆိုတာလောက်ပဲ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဒီလိုရုတ်တရက်ပြန့်ကြဲနေတဲ့စိတ်ကူးတွေစုစည်းမိပြီး အသိတခုရတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးဟာ သိပ္ပံညာတော်လှန်ရေးရဲ့ပထမလက္ခဏာရပ်ပဲဖြစ်တယ်။” (မှတ်ချက်။ ခန်းဟာ ရုတ်တရက်ညာဏ်ရပြီး အရစ္စတိုတယ်ကိုနားလည်သွားတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘော။ လူတယောက်ဟာအချက်အလက်တခုကို အလင်းပွင့်ပြီးရတယ်ဆိုတာ တခြားလူကိုဘယ်လိုလက်ခံ အောင်ရှင်းမလဲ။ သိပ္ပံမှာဒါကိုဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ။ ငါညာဏ်ပွင့်ပြီးရတဲ့ကိစ္စ မင်းဘယ်လိုနားလည်မလဲ၊ ဒီအတိုင်းသာလက်ခံလိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်)
ညာဏ်တွေ ဈာန်တွေကိုကျနော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းကြမလဲ။ တဆိတ် လူကြီးမင်းခင်ဗျား ကျနော်တော့ လိုက်လို့မမှီတော့ဘူး ဆိုပြီး ၀ိန်းဘတ်က ခန်းကိုဖြေရှင်းချက်တောင်းတယ်။ အရစ္စတိုတယ်သိပ္ပံကိုခုခေတ် အာရုံနဲ့ ခန်း ဘယ်လိုများခံစားလိုက်နိုင်တာလဲ။ ဒီလိုသာဆိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ခေတ် ၂၀၀၀လောက်ကစပြီး သွားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံနယ်မှာလည်း တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရမလိုပါပဲ။ ဘာထရန်ရပ်ဆဲပြောတာတခုကိုပြန်ကိုးကားရရင် အရစ္စတိုတယ်က မိန်းမတွေဟာ ယောကျာင်္းတွေထက် သွားအချောင်းရေနဲတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ မိန်းမနှစ်ယောက်ရခဲ့ဘူးတဲ့အရစ္စတိုတယ်ဟာ သူ့မိန်းမတွေရဲ့သွားတွေကို ရေကြည့်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီလိုတိတိကျကျမခိုင်မာပဲပြောတာထက်စာရင် မိန်းမရေ မင်းသွားတွေ ကိုယ်ရေနေတုန်း ပါးစပ်တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပေးပါကွာ လို့ပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်။ (မှတ်ချက်။ အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ ရူပဗေဒသဘောတချို့ ဟာ ခုခေတ်သိပ္ပံသမားတွေအတွက်လက်ခံနိုင်ပုံမရဘူး၊ ဒါကိုခန်းက တခဏညာဏ်အလင်းပွင့်ပြီး သိမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်စာရေးသူက အရစ္စတိုတယ်မှားပြောခဲ့တဲ့ သွားအရေအတွက်အကြောင်းကိုပြန်ကိုးကားပြီး ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကို ထင်သလိုယူတယ်ဆိုပြီး ခန်းကိုတွယ်တဲ့သဘောပါ။ ပြီးတော့ဒီလိုမရေမရာသိတဲ့အသိကိုပဲ သိပ္ပံပညာတော်လှန်ရေး သို့ အသိသစ်အတွက် ပထမဆုံးအဆင့်ဆိုတာမျိုးလုပ်ထားတာကို သူဘ၀င်ကျပုံမပေါ်ဘူး)
နော်တန်ဝိုက်စ် (Norton Wise) ဟာပရင်စတန်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ယူခဲ့တယ်။ ခန်း ရ၀ပြည့်နှစ်တွေက လုပ်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာသမိုင်းနဲ့အတွေးအခေါ် ဋ္ဌာနဒါရိုက်တာ နေရာကို ၉၁ ကနေ ၂၀၀၀ ထိလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်ဟာသူနဲ့ ညနေပေါင်းများစွာစကားပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ခန်းအကြောင်းတော်တော်များများကို ဝေဖန်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ သူနဲ့မတွေ့တာနှစ် ၄၀လောက်ရှိပြီဆိုပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့အချိန်ကာလဟာရပ်နေသလိုပါ။ သူ့သမီးအမွှာလေးနှစ်ယောက်တောင်ခုဆို ၄၀ ကျော်ပြီပေါ့။
နော်တန်ဟာ ကျနော့်ထက်တော့ပိုနှစ်လိုဘွယ်ကောင်းတာအမှန်ပါ။ ကျနော်တို့စကားဝိုင်းမှာ သူ့ပွင့်လင်း ရိုးသားမှုကို ကျနော်သတိပြုမိခဲ့တယ်။
နော်တန်။ ။ ခင်ဗျား သူဆေးလိပ်သောက်တဲ့ပုံစံကိုမှတ်မိသေးလား။ စီးကရက်တလိပ်ကိုသူမီးစညှိမယ်။ ပြီးရင်စကားစပြောမယ်။ စကားတ၀က်လောက်မှာ စီးကရက်ကို တ၀က်ကျိူးလောက်တဲ့အထိဆက်ဖွာမယ်။ ပြီးတော့ သူပြောတာကိုအစကပြန်ပြောမယ်။ ဒါသူနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကျနော်မှတ်မိနေတဲ့ပုံရိပ်တခုပဲ။
မောရစ်။ ။ ကျနော်မှတ်မိတာတော့ အစီခံတွေနဲ့ပြာတွေတောင်လိုပုံနေတာပဲ။
နော်တန်။ ။ စီမီနာတခုထဲမှာမလား။
မောရစ်။ ။ အင်း ဟုတ်တယ်
နော်တန်။ ။ ကျနော် လည်းဒါကိုမှတ်မိတယ်။ သူ့လိုဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတော့ တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါနဲ့ပဲသူသေတဲ့အထိဖြစ်တာပဲ။
မောရစ်။ ။ ကျနော်လည်းတခါတခါဆေးလိပ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုတွေးမိတယ်။ စီးကရက်သမားတွေအတွက် ကမ္ဘာကြီးဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးပိုင်းကွဲသွားတယ်။ ခင်ဗျားရယ်၊ စီးကရက်ရယ်၊ ဒါကလွဲတဲ့ တခြားအရာတွေရယ်ပဲ။
နော်တန်။ ။ အင်း၊ သူဆေးလိပ်သောက်တာက ကျနော့်အတွက်တော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့နက်ရှိုင်းမှု ကိုဖော်ပြတာပဲ။ ဆွေးပွဲတွေကတခုပြီးတခု၊ စပြီဆိုတာနဲ့လူတိုင်းဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမရှိတော့ဘူး။ သိသာတာတခုကတော့ ခန်းဟာသူပြောချင်တာတွေကိုတော့လေးလေးနက်နက်ဖြစ်အောင် သေသေချာချာ ပြင်လာတယ်။ တခြားသူတွေကိုလဲမျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူပြင်လာတာတွေကို အသေအချာဖတ်ပြီး စိစစ်တဲ့သူကအနည်းအကျဉ်းပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားဟာ အယူအဆတခုကို ချက်ချင်း လက်ခံရင်လက်ခံလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးကဖြစ်ခဲတယ်။ တနည်းနည်းနဲ့တော့ ကျနော်တို့ ပြန်ပြီး ချဲလင့်လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ ရန်ဘက်တွေလိုဖြစ်ကြရတယ်။ တခါတခါကျတော့အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြရတယ်။ သူမသေခင်ထိပဲ ကျနော်တို့ဟာ အကြောင်းအရာတခုခုပေါ်ကောက်ယူကြတာမှာ အပြိုင်အဆိုင်လိုသဘောထားခဲ့ကြတယ်။
မောရစ်။ ။ မျှော်လင့်မထားတာမျိုးပဲ။
နော်တန်။ ။ ပထမ စဖြစ်တာက ၀ီလျှံသော်မဆင်ရဲ့အစောပိုင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်သချာင်္အပိုင်းမှာ။ သူက ကျနော့်ဆိုလိုရင်းကိုအပြတ်ငြင်းထဲ့လိုက်တယ်။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါ သော်မဆင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဆင့်တွေ အတိုင်းသွားတာမဟုတ်လို့တဲ့။ ဒါရူပဗေဒသမားတယောက်ရဲ့အားလုံးကိုခြုံကြည့်တဲ့အမြင်မျိုးတဲ့။ နောက်ပိုင်းမှ သိတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးပြန်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတာလို့ပြောတယ်။ ကျနော်လည်းဒီတခုတော့ အသေအချာ ပြင်ဆင်သွားတော့ အသေးစိတ်ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန် လေးစားမှုရခဲ့တယ်။ သူဟာကျောင်းသားတွေဆီကသူ့အသိကိုစံနစ်တကျဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးကိုလိုချင်တာ။ တချို့အတွက်တော့အဆင်ပြေပေမယ့် တချို့မတော့ကပ်ဆိုက်သလိုပေါ့။
မောရစ်။ ။ ခင်ဗျားက ပြိုင်ဘက်လို့သုံးတယ်နော်။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရတော့ ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့အထိပဲ။
နော်တန်။ ။ အင်း
မောရစ်။ ။ ကျနော် ပရင်စတန်ကိုစရောက်တော့ Kripke လက်ချာတွေမတက်ဖို့အထိ ရာဇသံပေးခံရတာ။
နော်တန်။ ။ ကျနော်တော့လုံးဝမကြားမိဖူးဘူး။ အဆန်းပဲ။
မောရစ်။ ။ ဟုတ်တယ်။ ခင်ဗျားဆိုသွားချင်မှသွားမှာ။
နော်တန်။ ။ အင်း သေချာတာပေါ့။ ခင်ဗျားတော့သွားတာပဲမလား။
မောရစ်။ ။ ဟုတ်တယ်။
ကျနော်တို့ဆွေးနွေးတာ Butterfield နဲ့ Whiggishness ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။Herbert Butterfield သည်အင်္ဂလိပ်သမိုင်းဆရာ၊ Whiggishness သည် ဘတ်တာဖီး၏ The Whig Interpretation of History, 1931 စာအုပ်မှယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်ကို လက်ရှိအမြင်နှင့်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရာ သမိုင်းသည်တဆင့်ပြီး တဆင့်မြင့်တက်ပြောင်းလဲလာသည် ဆိုသည့်အမြင်ကိုရစေသည်။ မူရင်းမှာ နိုင်ငံရေး၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလန် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ သို့ရောက်ရန်သမိုင်းသည်ဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရသည်ဆိုသည့်အမြင်ဖြစ်သည်။ ထိုအမြင်၏အားနည်းချက်တခုမှာ သမိုင်းကိုအကောင်းမြင်ဖြင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်တွင်ရှိခဲ့သည့် အမှားနှင့် အခြားပိုကောင်းမွန်နိုင်သည့်အနေအထားများကို စိစစ်မှုလုပ်စရာ မလိုသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်။ ထိုနိုင်ငံရေးစကားလုံးကို သိပ္ပံသမိုင်းအတွက်ကူးပြောင်းသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တခုမှာ Cultural Pessimism ဖြစ်သည်)
မောရစ်။ ။ ခင်ဗျားမပြောပေမဲ့ ခန်းဆီမှာစာသင်လာခဲ့ရတော့ Whiggishness ဆိုတာဟာခင်ဗျားလျှာဖျားပေါ်မှာ ရှိနေမှာပဲ။ သော်မဆင် အကြောင်းခင်ဗျားတို့ငြင်းကြတာဒါနဲ့လည်းပါတ်သက်မယ်။ ကျနော်တိတိကျကျလေး သိချင်တယ်။ ခင်ဗျားဟာ မကြာသေးခင်ကမှ ရူပဗေဒနဲ့ ပီအိပ်ခ်ျဒီ ရတာဆိုတော့ ရူပဗေဒသမားတယောက် လိုတွေးမှာပဲ။ သမိုင်းဆရာတယောက်လိုတော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ (မှတ်ချက်။ သိပ္ပံမှမဟုတ်အကြောင်းအရာ တခုကို ဖြေရှင်း ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ်သိပြီးသားအချက်တွေအားလုံးကို ထဲ့သွင်းစဉ်းစား ကြတယ်။ ဒီမှာပြောလိုရင်းက နျူတန်ရဲ့မက်ကင်းနစ်ကို အိုင်စတိုင်းကိုနားလည်ပြီးမှ သိထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ စဉ်းစားရင် နျူတန်ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ရဖို့မလွယ်ဘူး။ သို့သော်နျူတန်အကြောင်းစဉ်းစားနေစဉ်မှာသမိုင်းအရအိုင်းစတိုင်းကနောက်ကမို့သူ့ကိုထဲ့တွေးလို့မဖြစ်ဘူး ဆိုတာမျိုး ရူပဗေဒသမားကလုပ်ဖို့သတိရမယ်မထင်ဘူးဆိုလိုသည်)
နော်တန်။ ။ အတိအကျပဲ။
မောရစ်။ ။ အဲဒါကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းတောင်မသိဘူး။ Whiggishness ၀င်နေတယ်လို့စွပ်ဆွဲချက်ဟာ ကြိမ်နဲ့နှက်ခံရသလိုပဲ။
နော်တန်။ ။ ဟုတ်တယ်။ တယောက်ယောက်အမြင်နဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ပျက်အောင် ဒီတံဆိပ်ကပ်ပြီး တွယ်တော့တာပဲ။
မောရစ်။ ။ ကြိမ်တချောင်းနဲ့၊ တုတ်တိုနဲ့ ပေါ့။
နော်တန်။ ။ ကျနော်လည်းပုံစံတမျိုးနဲ့ပြန်လေ့လာခဲ့ရတယ်။ ၀ါကျတွေတခြားနည်းနဲ့အသစ်ပြန်ရေး၊ စာလုံးတွေကို တကြောင်းချင်းတကြောင်းချင်းပြန်စိစစ်ကြည့်ရတော့တာပဲ။
မောရစ်။ ။ ဘာလဲ၊ အသေးစိတ်ဖတ်ခြင်း (Close Reading) လား။
နော်တန်။ ။ ဟုတ်တယ်။
အသေးစိတ်ဖတ်ခြင်း။ ဒါကိုဘာနဲ့ငြင်းမလဲ။ အသေးစိတ်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကောင်းတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ Incommensurability နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ စာတပိုဒ်ကိုသာစေ့စေ့စပ်စပ်ဖတ်၊ ဒါဆိုကျနော်တို့နားလည်မယ်လို့အသေးစိတ်ဖတ်ခြင်းကဆိုတယ်။ Incommensurability (စံတခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်မဖော်ပြနိုင်ခြင်း) ကအထိုင်တခုထဲမှာရေးထားတဲ့စာ၊ အယူအဆ တခုကို အခြားအထိုင်တခုကနေ နားလည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတယ်မလား။
ဒီမှာ Kripke ကိုပြန်သတိရဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်သူနဲ့ဆီလျှော်ရသလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ပညတ်နဲ့လိုအပ်ချက်က စကားလုံးနဲ့အရာဝထ္ထုကြား အတိတ်နဲ့လက်ရှိကြားမှာ ဆက်စပ်ပေးလို့ပဲ။ သူကဒီလိုမပြောပေမဲ့လည်း သူဟာ သမိုင်းတွေးခေါ်ရှင်တွေထဲကတယောက်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာအတိတ်က အထူးအဆန်းတွေကိုယုံကြည်နိုင်တယ်။ ပြန်ပြီးကိုးကားနိုင်တယ်။ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကျတဲ့အမှန်တရားတခု၊ သမိုင်းတခု ဟာရှိနေတယ်။ ခရစ်မတိုင်မီ ၆ ရာစုလောက်ကယုံကြည်မှုတွေကို၊ အဲဒီခေတ်သချာင်္ပညာရှင်တွေကို ကျနော်တို့လက်လှမ်းမမှီဘူးဆိုဦးတော့၊ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတယ်ဆိုဦးတော့၊ ဟစ်ပါးစုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ခေတ်ပြိုင် တယောက်ယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် √2 လို့ပြောလာရင် ဒါကျနော်တို့ပြောချင်တဲ့ √2 နဲ့အတူတူပါပဲ။
ငါးလေးဝါ၀ါဥပမာကိုပြန်ကြည့်ပါ။ အချိန်တွေပြောင်းသွားလို့ ၀ါဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့လက်ခံထားတာတွေ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုဦးတော့ (၀ါဝါဟာအရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုဦးတော့) ၀ါဝါဆို ကျနော်တို့သူ့ကိုညွှန်းတာပါ။ ခုအထိုင်တခုမှာရှိတဲ့ဝါ၀ါ၊ နောက်အထိုင်တခုပြောင်းသွားလို့ဝါ၀ါမဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကလေးတယောက်က ကမ္ဘာကြီးပြားတယ်ပြောတယ်။ ကျနော်ကလုံးတယ်ပြောတယ်။ ပြားတယ်၊ မဟုတ်ဘူး လုံးတယ်၊ ပြားတယ်ဗျာ၊ လုံးတယ်ကွာ၊ ဒီလိုအငြင်းအခုံကျတော့ ခန်းသဘောက ကျနော်တို့ဟာ မတူတဲ့အထိုင်နှစ်ခုမှာရှိနေလို့ ကျနော်မြင်တဲ့ ကမ္ဘာကို ကလေးမြင်တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ကြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ဘုံအညွှန်းဘောင်မရှိဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့်၊ နေဦးနေဦး၊ ကျနော်တို့မှာ တကယ့်ကမ္ဘာကြီးရှိနေတယ်။ အဲဒါဟာပြားလား။ လုံးလား။ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလား၊ တခုခုတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့။ တခုမှမဟုတ်တော့ရင် ဒါ အဲလစ် ကလေးကို Humpty Dumpty ပြောသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြာခြွေခွက် ငြင်းခုံမှုပေါ့။ ကျေးဇူးပြုပြီး သိထားဖို့လိုတာက ဒါဥာဏ်စမ်းသက်သက်မေးခွန်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ ဟာသဘာဝ တရားရဲ့ရွေးချယ်မှုလား၊ ဘုရားသခင်ဖန်တီးတာလားဆိုတဲ့ ကွဲပြားချက်ကိုသိဖို့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာသိပ္ပံဆိုင်ရာအမှန်တရားအကြောင်းပါ။ ဒါကိုတန်ဖိုးချဖို့မဟုတ်ဘူး၊ ဒီ့အတွက် တာဝန်တချို့ကိုခွဲယူဖို့ပါ။
တကယ်သာ တဦးဦးကသာ အမှန်တရားဟာ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်၊ ကြည့်သူပေါ်မှာပဲတည်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် တခြားမှီရာတခုခုစီမှာသာတည်တယ်လို့ဆိုရင်၊ ရာဇ၀တ်မှုတခုရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲ။ ခင်ဗျားမကျူးလွန်တဲ့ရာဇ၀တ်မှုတခုကြောင့်ခင်ဗျားကိုပြစ်ဒါဏ်ချခံရပါပြီတဲ့၊ ဘာပြောမလဲ။ ဒီမှာ အချက်အလက်ကတခုပဲ၊ ခင်ဗျားကျူးလွန်သလား၊ မလွန်ဘူးလား။ ဒါပဲ။
ခင်ဗျားကိုလျှပ်စစ်ကုလားထိုင်မှာချည်နှောင်နေပြီ။ ခင်ဗျားမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ အဲဒီအချိန်တယောက်ယောက် အပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာ သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အညွှန်းတခုပေါ်မှာမူတည်တာပဲလို့ပြောလာရင် ခင်ဗျားဘာပြန်ပြောမလဲ။ ငါမလုပ်ဘူး၊ သက်သေတွေအားလုံးရှိတယ်လို့အော်မလား။ ဂျုရီလူကြီးက အမှုတခုကို မင်းမြင်တဲ့ပါရာဒိုင်းနဲ့ ငါလက်ခံထားတဲ့ပါရာဒိုင်းကမတူဘူး။ မတူတဲ့ ပါရာဒိုင်းနှစ်ခုကြားမှာ ငါတို့အမှန်တွေကို ယှဉ်ကြည့်လို့မရဘူး။ ငါမြင်တာငါဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် လက်ခံမလား။
သမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တခုရဲ့တိကျမှုဟာအမြဲတမ်းဆိုသလို နှိုင်းရမှန်ကန်မှုနဲ့သွားရောထွေးပါတယ်။ မတူတဲ့သဘောတရားနှစ်ခုပါ။ ရှေးကစစ်ပွဲတပွဲ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲနဲ့နေရာအတိအကျကို ပြောဖို့ခက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာအဲဒီမှာစစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အယ်ပီ ဟတ်တလေ ရေးခဲ့သလိုပေါ့။ အတိတ်ကာလဆိုတာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုပါပဲ။ သူတို့တခြားကျနော်တို့နဲ့ မတူတာတွေလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးမားစာထဲက နေလုံးကြီး ဟာ အဲလီယော့ပြောတဲ့ နေပါပဲ။ ရွေ့နေတဲ့အရာဝထ္ထုတွေရဲ့ လျှပ်စစ်ဒိုင်းနမစ်အကြောင်း အိုင်စတိုင်းနဲ့နျူတန်သာဆွေးနွေးကြရင် သဘောတရားမှာသာမတူတာရှိနိုင်ပေမယ့် တယောက်ပြောတဲ့ လျှပ်စစ်ဒိုင်းနမစ်ဟာ နောက်တယောက် မှာလည်းဒါပါပဲ။ အတိတ်ဟာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခု၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာပြောတဲ့ဘာသာစကားကို နားမလည်နိုင် ဘူးလို့တော့ ကျနော်မယုံကြည်ပါဘူး။
Ref. Ashtray by Errol Morris, IHT March 6/7/8/9/10’ 2011
Posted by KZကေ at 18:01 1 comment: